ထွက်မဝယ်?2နှစ်ပေါင်း7months ago #856
ကိုယ့်တစ်ဦးပတေရုသ Hawthorne ထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူနဲ့သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့ Rikooo နှင့်အတူပေါင်းစည်းရန်ဆန္ဒရှိတူသောအသံ။ ဖတ်ပါနှင့်သင်ကလိုင်းပေါ်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ထည်က်ဘ်ဆိုက်များ၏အဆုံးများကဲ့သို့အသံမထင်ကြပါလျှင်ဖတ်ရှုပါ။ သင်ထင်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါ။
ထွက်မဝယ်?2နှစ်ပေါင်း7months ago #857
စိတ်မကောင်းပေမယ့်သင်တို့ကိုငါအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်ဆိုတာကိုတစ်သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ... ?
ထိုအခါငါပတေရုသ Hawthorne သူသည်မသိရပါဘူး။
ထွက်မဝယ်?2နှစ်ပေါင်း6months ago #858
ဒီဇင်ဘာ 11 (1 တစ်ရက်လွန်ခဲ့တဲ့)
ကိုယ့်ကိုဒေါင်းဖတ်ပါ FSX, FSX-Steam နှင့် Prepar3D - Rikoooo, ငါသည်အချို့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပြသပါတယ်နှင့်ကျွန်တော်တို့အကြားပူးပေါင်းကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းထင်ပါတယ်။
ကျွန်မလက်ရှိအန်းဒရွိုက်ကဲ့သို့တူညီသောဈေး၌လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဦးဆောင်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုကိုယ်စားပေါ်တွင်သင်၏ site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာထူးခြားတဲ့အပိုင်းအစ feature ချင်ပါတယ်။ အခွင့်ထူး, ကြှနျုပျတို့တစ်နေရာရာမှာ $ 65 ၏ဒေသတွင်း၌သင်တို့ကိုပေးဆောင်ဖို့ပျော်ရွှင်ချင်ပါတယ်။
ထွက်မဝယ်?2နှစ်ပေါင်း6months ago #859
2: (34 နာရီအကြာက) 13 AM
, Keith မင်္ဂလာပါ
သငျသညျအကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုတခုတခုအပေါ်မှာစိတ်ကူးပေးဖို့ကျနော်တို့သင့် site များအတွက်စပွန်ဆာအကြောင်းအရာရေးသားဖို့ရှာဖွေနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာကိုများသောအားဖြင့်တစ်ဦး 500-စကားလုံးဆောင်းပါး၏ပုံစံလာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client ကိုတစ်ဦး '' လုပ်ပေး-အတိုင်းလိုက်နာ '' link ကိုပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၏စာရေးဆရာသင့်ရဲ့ site ပေါ်တွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်သေံ, စတိုင်, နှင့်သင်များသောအားဖြင့် post content တွေကိုအမျိုးအစားများအတွက်ခံစားရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ Blog ကိုများအတွက်စက်ချုပ်ဆောင်းပါးသွားနှင့်ရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်, ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်သင်ကမသင့်တော်ပါကိုရှာဖွေလျှင်ဆောင်းပါးပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ site ကိုအထောက်အကူပြုကြောင့်ပို့စ်တင်၏အခွင့်ထူးဘို့သင့်ကိုပေးဆောင်ဖို့ချင်တယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များသို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏နာမကိုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားကြဘူး - ပုံမှန်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများပြန်လည်သုံးသပ်ကျော်စေလွှတ်တဲ့အခါမှသာ။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အဆင်ပြေဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့သည်လည်း '' စပွန်ဆာ '' အဖြစ် post ကိုမှတ်သားခြင်းကိုမတောင်းဆိုလိမ့်မယ်။
ဤကိစ်စတှငျသငျသညျမှာကမကထပြုပို့စ်များကိုလက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း www.rikoooo.com/ ? ငါတို့သည်ငါတို့၏ယခင်အီးမေးလ်ကို (post ကိုတစ်ဦးလျှင် $ 65) တွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်စျေးနှုန်းကိုသင်နှစ်သက်လက်ခံသည်ဆိုပါကပဲငါ့ကိုဒါကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ထပ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်သိကြကုန်အံ့။
buy out???2နှစ်ပေါင်း6months ago #860
ဤရွေ့ကား, ငါသည်လက်ခံရရှိတာပါဟာအီးမေးလ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုတွေ့မြင်ခိုလှုံပါ၏။ ငါပင်ထိုအကြည့်ဖို့ထင်တာမထင်ကြဘူး။ SNAFU အချို့မှာမျိုး။
ထွက်မဝယ်?2နှစ်ပေါင်း6months ago #861
ဒါဟာအမှန်တကယ်တစ်ဦးကိုစပမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့အားအီးမေးလ်များတစ်ခုမှာ spammer သို့မဟုတ် bot တစ်ကောင်အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
သူတို့ကို reply မနေပါနဲ့
0.235 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်